Honor Magic4Series ကို MWC2022 မှာ ပွဲထုတ် - Pandaily
Honor Magic4Series ကို MWC2022 မှာ ပွဲထုတ်
Feb 28, 2022, 22:10ညနေ 2022/02/28 23:12:58 Pandaily
တရုတ် စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ်Honor သည် Magic4 စီးရီး အသစ် ကိုစတင် ခဲ့သည်တနင်္လာနေ့ ညတွင် Earplug3Pro နှင့် Watch GS3ကဲ့သို့သော အခြား ထုတ်ကုန် အသစ်များ လည်းရှိသည်။ Honor CEO George Zhao ဟာ ဒီ အစြမ္း ထက္ တဲ့ ထုတ္ကုန္ ေတြကို တစ္ နာရီၾကာ ျပသ ခဲ့ၿပီး Honor Magic4 Pro ဟာ Pain Point Killer ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ကိုကြည့် ရအောင် ။
Configuration Honor Magic 4
ပြသ 6.81 လက်မ flex OLED, 2848 x ကို 1312 resolution ကို, 120 Hz Refresh Rate, 360 Hz Touch ကိုနမူနာ, 1000 Nit, 10.7 ဘီလီယံ အရောင်
Processor ကို Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 မိုဘိုင်း ပလက်ဖောင်း + GPU Turbo X ကို
မွတ္ ဥာဏ္ 8GB + 256GB
Software များ အန်းဒ ရွိုက် 12, Magic UI ကို 6
ကင်မရာ နောက်ဘက် ကင်မရာ: 50MP Ultra-wide ကင်မ ရာ၊ 7P မှန်ဘီလူး ပါသော 50MP ကျယ်ပြန့်သော ကင်မ ရာ၊ 8MP periscope telephoto ကင်မ ရာ၊ ရှေ့ ကင်မရာ 12MP
အရောင် အနက်ရောင်, အဖြူ, cyan, ရွှေ
ေစ်းႏႈန္း 899 ယူရို
ဘက်ထရီ 4800 mAh ဘက်ထရီ, 66W က Wired Supercharged
အပိုဆောင်း features တွေ နှစ်ဆ T-shaped လုံခြုံ operating system ကို
Honor Magic4 Professional က
Configuration Honor Magic4 Professional က
Software များ အန်းဒ ရွိုက် 12 Magic UI ကို 6
ကင်မရာ နောက်ဘက် ကင်မရာ: 50MP Wide Camera, 50MP Ultra Wide Camera, 64MP Periscope Telephoto Camera, 8 * 8DTOF; Selfie ကင်မရာ: 12MP Ultra-Wide ကင်မရာ နှင့် 3D Depth ကင်မရာ
ေစ်းႏႈန္း ယူရို 1,099
ဘက်ထရီ 100W ကြိုးမဲ့ အာနိသင် တိုးမြှင့် (15 မိနစ် အတွင်း 50%), 100W ဝါယာကြိုး အာနိသင် တိုးမြှင့်
အပိုဆောင်း features တွေ စက်မှုလုပ်ငန်း ရဲ့ ပထမဦးဆုံး LTPO display ကို 1920 HZ PWM မှိန်, AI အရောင် အင်ဂျင်, dual-Tee လုံခြုံ OS ကို,
Honor နာရီ GS 3
Honor Watch GS3သည် Ocean Blue, Midnight Black နှင့် Classic Gold အရောင် သုံးမျိုး ဖြင့် ထောက်ပံ့ ထားသည်။ သူ့ရဲ့ Super Bright Screen ကတော့ ၁. ၄၃ လက်မ AMOLED Touch Screen ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး Brightness 1000 nits အထိ ရှိပါတယ်။ စမတ် နာရီမှာ GNSS positioning system အတွက် 8-channel heart rate AI engine နဲ့ dual-frequency ban တပ်ဆင် ထားပါတယ်။ ဤ ဝိသေသလက္ခဏာ များကြောင့် တည်နေရာ တိကျမှုသည် ၁၆၇% တိုးတက်ခဲ့ပြီး တည်နေရာ မြန် နှုန်းမှာ ၄၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ နာရီ မွာလည္း ေလ့က်င့္ခန္း ပံုစံ ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါတယ္။ အနက်ရောင် ဗားရှင်း ကို ယူရို ၂ ၂၉ မှ စတင်ပြီး အပြာ နှင့် ရွှေ ဗားရှင်း ကို ယူရို ၂ ၄၉ မှ စတင်သည်။
Honor နားကြပ်3Professional က
ယူရို ၁၉၉ ဖြင့် Honor ၏ Earbuds3Pro အသစ်သည် အလေးချိန် ၅. ၁ ဂရမ် သာ ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ ပထမ ဦး ဆုံး coaxial dual drive ဒီဇိုင်း ကိုအသုံးပြု ထားပြီး super-amplitude drive နှင့် PZT tweeter ပါရှိသည်။ အပူချိန် စောင့်ကြည့် မှုနဲ့ 5C အမြန် အားသွင်း နည်းပညာ ပါဝင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး TWS နားကြပ် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အား သြင္း ခ်ိန္ ၅ မိနစ္ ပဲ လို ၿပီး ၂၄ နာရီ ျပန္ ကစား ႏုိင္ပါတယ္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ် ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့ ဘေဂျင်း တွင် အခြေချ
Honor Magic4 စီးရီး တရားဝင် MWC
တ႐ုတ္ စမတ္ဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္ Honor သည္ မၾကာမီ မိတ္ဆက္ မည့္ Magic4 Series မ်ားကို ဘာစီလိုနာ ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ ေဘဂ်င္း စံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီတြင္ က်င္းပမည့္ Mobile World Congress (MWC) ၌ မိတ္ဆက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။